इलिजाबेथ याकूब द्वारा लिज जेकब: परम्परागत बच्चाहरूको लुगाको लागि राम्रो विकल्प - Print Peppermint
इलिजाबेथ याकूब द्वारा लिज जेकब: परम्परागत बच्चाहरूको लुगाको लागि राम्रो विकल्प
सेप्टेम्बर 25, 2019 | उद्यमी, सुरूवात
आज, बच्चाहरूका लागि धेरै ब्रान्डका कपडाहरू छन्। होम-आधारित उत्पादनहरू उनीहरूको पैसाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रन दिन्छन्; यद्यपि, आफ्ना साना बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो दिन उत्सुक आमाबुवाहरूले बढी मागेका छन्। शैली, रंग र फिटको साथ बाहेक, अभिभावकले अब अधिक दिगो कम्पोनेन्टको साथसाथै अन्डरटेड स्टाईलनेसको खोजी गर्दैछन्।
यहीं लिज याकूब आइपुग्छन्। एलिजाबेथ याकूबको स्वामित्वमा लिज जेकब हस्तनिर्मित वस्तुहरूको एक सरणी हो जुन सुन्दर, कलात्मक, साथै छ बर्ष भन्दा माथि उमेरका बच्चाहरूको लागि दिगो आदर्श हो। यो ब्रान्ड २०१ 2014 मा ब Bengal्गालोरमा विकसित भएको थियो। परिधानहरू नरम कपासका साथै कलात्मक विधिहरू जस्तै स्क्रिन प्रिन्टि,, ब्लक-प्रिन्टि,, एप्लिक्यु, एम्ब्रोइडरी र हात पेंटि itemsका लागि बनाइएका छन् जुन ताजा रमाइलो छन्। धेरै रचनात्मक पनि। केही ग्राहकहरूको साथ सुरू गर्दै, अब लिज जेकब अष्ट्रेलिया र दुबईमा धेरै लोकप्रिय छ।
उनी कसरी सुरु भयो?
यो ब्रान्डको चाखलाग्दो यात्रा छ। एलिजाबेथ एक कलाकार छिन जबदेखि उनी बच्चा थिइन्, र कपडा डिजाइन गर्न, ग्लैम अप गर्न र रंगीन स्क्र्यापबुकहरू निर्माण गर्ने मौका गुमाए। उनको अनुसार, उनले हुर्किएपछि आफ्ना आमाबाबुको दर्शन र अवधारणा आत्मसात गरिन्। इलिजाबेथले हल्का स्टाइलिनेसन्सको हल्का बारीकाहरू सिके। यो उनको परिवारले गरेको सम्पूर्ण कुरामा देख्न सकिन्छ - जस्तै उनीहरूको घरको सजावट, उनीहरूले लगाएका लुगा, र पारिवारिक घटनाहरू।
बच्चाहरूको लागि किन पोशाक?
व्यवसायमा उनको क्यारियरले उनलाई २१०2104 सम्म कलामा ध्यान दिन समय दिइन, जसमा उनले गर्भावस्थाको कारण छुट्टी लिइन्। त्यो समय, एलिजाबेथले आफ्नो बच्चाको लागि एक्लेक्टिक र उत्तम पोशाक खोज्न संघर्ष गरिरहेकी थिइन। त्यहाँ धेरै स्टोरहरू छन् जसले असाधारण डिजाइनहरू प्रदान गर्थे। उनी विश्वास गर्छिन् कि बच्चाहरूको लागि कपडाको डिजाइन धेरै पार भयो। छायाँ ठूलो र धेरै सिक्काँको साथ उच्चारण गरीएको थियो। सामग्री कृत्रिम थिए, जुन सक्रिय बच्चाहरुका लागि सहज छैन।
विकसित अभिभावक शैली संवेदनशीलताका साथ ती अभिभावकहरूले सौन्दर्य लुगाको लागि विदेशमा खरीद गर्छन्। उनले यसैलाई घर-आधारित उत्पादन गर्ने अवसरको रूपमा हेरिन् जुन प्राकृतिक सामग्री, सरल डिजाइनका साथै उत्तम फिनिशहरू बनाउँदछन्। यहीँ लिज याकूब ब्रान्डको जन्म भएको थियो।
एलिजाबेथले पाइलटहरू धेरै हातले चित्रित पोशाकको साथ शुरू गरे र तिनीहरूलाई फेसबुकमा बेच्न। उनले आफ्नो रचनाहरू आमा केन्द्रित फोरममा पोष्ट पनि गरिन्। कपडाले धेरै व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गर्‍यो। एलिजाबेथ लुगा हप्ताको दुई हप्ताको टुक्रा देखि हटकक जस्तै बेच्छ। उनीहरुका पसलहरुसँग निरन्तर कुराकानीले उनीहरुलाई अधिक डिजाइनहरु बनाउने आत्मविश्वास दिइयो।
एलिजाबेथका अनुसार, उनले कम्पनी शुरू गरेको बखत ग्राहकहरूको लागि डिजाइनहरू मात्र पेन्ट गरिन्। यो रेखा स्केलेबल र आकर्षक थिएन। कपडामा पेन्टि time समय खपत हुने र थकाउने हो, र उनले बच्चाको कडा परिश्रमका साथै न्याय गरिएको समयको औचित्य प्रमाणित गर्नको लागि लुगामा उच्च प्रीमियम माग्न सक्दिनन्।